Muxuu ka yiri Frank Lampard guuldarradii ay Chelsea kala kulantay Manchester City?? – Gool FM
(London) 04 Jan 2021. Tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea ee Frank Lampard, ayaa xaqiijiyay inaysan u wanaagsaneyn sidii la rabay kulankii ay la ciyaareen naadiga Manchester City.
Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa guul weyn oo 1-3 ah kaga soo gaartay Chelsea, garoonkeeda Stamford Bridge, sidaas darteed kooxda reer London waxay gaartay kaliya hal guul lixdii kulan ee ugu dambeysay horyaalka Premier League, waxaa laga badiyay 3 kulan, waxayna barbaro gashay 2 kulan kale.
Haddaba Frank Lampard ayaa kulanka kaddib wuxuu ka hadlay guuldarrada ay kala kulmeen kooxda Manchester City, wuxuuna yiri:
“Waxaan fiicneyn 10 daqiiqo, kaddib waxay bilaabeen inay u ciyaaraan wadadooda, waxaana nalaga dhaliyay labo gool oo aan macquul aheyn.”
“Tani waxay ahayd dharbaaxo, anaguna si fiican ugama jawaabi karno, waxaan boos siinay Kevin de Bruyne iyo Ilkai Gundogan goolkii koowaad, waxaanan helnay casharo culus qaybtii hore.”
“Waxaan soo bandhignay dabeecad wanaagsan qaybtii dambe ee ciyaarta, laakiin ciyaartu si wax ku ool ah ayey ku dhammaatay.”
“Qof walba wuxuu dhahayay bil ka hor, inaan ku guuleysan karno horyaalka, aniguna waxaan ku iri waqtigaas waxaan ku jirnaa marxaladda dib-u-dhiska.”
“Waxaan haatan maraynaa xilli xun. Waxaan dhibtoonay 5 ama 6 kulan… laakiin haddii aad dib ugu noqoto xilliyadii ay soo mareen Man City iyo Liverpool marxaladii kala guur ahayd, waxaa jiray marxalado xanuun badan, oo ay tahay in sidoo kale laga gudbo.”
“Ciyaaryahan kasta oo kubadda cagta ah wuxuu mari doonaa xilliyadan … waa inaan aqbalnaa guuldarada iyadoo madaxa kor loo qaadayo, tani waa kubadda cagta.”
“Waxaan leenahay dabeecada, waxaan ciyaarnay 16 kulan guul daro la’aan. Bil ka hor, dadku waxay isweydiinayeen sida ay wax noqon doonaan, goormaad saxiixi doontaa qandaraas cusub? Balse Hada waxay dhihi doonaan wax taasi ka duwan.”
Lampard ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay: “Waxaan noqon doonaa kan ugu horeeya ee maanta naftiisa fiiriya, laakiin waan ogahay mowqifkeena, waana ogahay waxa aan u baahanahay si aan ugu ciyaarno sida ay u ciyaartay Man City Maanta.. Waa wax dabiici ah in nala garaaco, laakiin waqtigan la joogo waa imtixaan.”
Kooxda Arsenal oo hoos u dhigtay xiisihii ay u qabtay inay Janaayo kula soo wareegto Isco & Xiddig Gunners ah oo sabab u ah